सम्भोग बढी, झगडा कम !| Gandaki Voice
पोखरा । कोरोना महामारीको सुरुआती समयमा थुप्रै विशेषज्ञलाई लागिरहेको थियो कि कोभिड-१९ को तनावका कारण मानिसहरुको रोमान्टिक जीवन ध्वस्त हुनेछ । तर हालै गरिएको एक अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ कि महामारीको समयले मानिसहरुको सम्बन्ध उत्कृष्ट बनाउने काम गरेको छ ।
मोनोमाउथ विश्वविद्यालयद्वारा फेब्रुअरीमा जारी गरिएको एक राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसार ७० प्रतिशत रोमान्टिकल्ली कमिटेड अमेरिकी आफ्नो सम्बन्धबाट पूर्णतः सन्तुष्ट छन् । यो आँकडा पछिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा ११ अंकले बढी छ । यस्तो अनुसन्धान विश्वविद्यालयले पछिल्लो ६ वर्षदेखि गराउँदै आएको छ ।
डेनियल भन्छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा तपाईंहरु सँगै बस्नुबाहेक अरु विकल्प रहँदैन । यसका कारण तपाईंको मनमा अनावश्यक विचार आउँदैन । जस्तैः के मेरो पार्टनरले मलाई साँच्चै नै मन पराउँछन् ? वा के मेरा पार्टनर मसँग बस्न चाहन्छन् ? क्वारेन्टिनमा बस्दा मलाई महसुस भयो कि हामी साँच्चै नै एक–अर्कासँग कुरा गरेर निकै खुशी हुन्छौं ।’
त्रिनिदादको आइल्याण्डमा बस्ने २७ वर्षकी लतिफा लिवरपूल सात वर्षदेखि आफ्ना प्रेमीसँगै बसिरहेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘महामारी अघि हामी दुई यात्रा र पार्टीमा आफ्नो समय व्यतित गर्दथ्यौं । तर लकडाउनले हामीलाई नयाँ ढङ्गले एक-अर्कालाई बुझ्ने मौका दियो । हामी दुबैले अचानक एक–अर्काको मनपर्ने टिभी शो सँगै बसेर हेर्ने मौका पायौं ।’
लतिफाका अनुसार हामीले वास्तवमा एक अर्कालाई बुझ्न सुरु गरेका थियौं । उनले आफ्नो पार्टनरको एउटा मनपर्ने शोको कुरा गर्दै भनिन्, ‘उनले निकै उत्साहित भएर मलाई शोको ब्याकस्टोरी सुनाउने गर्दथे । यसमार्फत् मैले उनको बाल्यकालबारे पनि धेरै कुरा थाहा पाउने मौका पाएँ ।’ लतिफाले आफूहरु पहिलाको तुलनामा बढी रोमान्टिक भएको र अली बढी नै इन्टिमेट हुन थालेको पनि बताइन् ।
मिनेसोटामा बस्ने ४५ वर्षका ग्लेन इर्विन फ्लोरेस भन्छन्, ‘म आफ्नी श्रीमतीसँग सधैं वाकमा जान्थेँ, यसका कारण उनलाई महसूस हुन्थ्यो कि म उसलाई कति केयर गर्छु । हामीबीच बढेको फिजिकल एक्टिभिटीले कठोर मुद्दामा खुलेर कुरा गर्न सहज बनाइदिएको थियो ।’
फ्लोयेरले भने, ‘मैले रक्सीको लत छोडेको थिएँ । अब हामी एक-अर्कासँग समय बिताउन थालेको थियौं । एक अर्कालाई सुन्न थालेको थियौं । समय पछि एक-अर्कालाई समय नदिँदा हाम्रो सम्बन्ध निकै खराब भएको थियो । एकपटक त यस्तो समय आएको थियो जब हामीले म्यारिज काउन्सिलबारे सोच्न थालेका थियौं ।’
शिकागोस्थित कपल्स थेरापिस्ट शेमियाह डेरिक भन्छिन्, ‘तनावका बीच पनि महामारीका कारण भएको लकडाउन र सामाजिक दूरीले दौडधूपयुक्त जीवनलाई बिराम दिने काम गरेको छ । मानिसहरु आफ्नो पार्टनरसँग गुणस्तरीय समय व्यतित गर्न थालेका छन् जुन यसअघि निकै कम देख्ने गरिन्थ्यो । यसले सम्बन्धमा थप घनिष्ठता पनि आएको छ ।’ -एजेन्सी